Galbeedka in Sharci ka Jiro Gudahana Xabad UBO ha Ogaato – Rasaasa News
Dambiile Kornayl Ducaale oo lagu xukumay hal sano oo xadhig ah iyo Maxkamad Sweden ka Socota oo la sugayo in ay xukun ku rido ugu yaraan 5 xubnood UBO-Jwxo-shiil ah, laguna cadeeyey in ay dhaawac halis ah u gaysteen muwaadin Somalida Ethiopia ah.
UBO-da Jwxo-shiil, iyo arggigixisada oo adin iyo afba waxayeelo gaadhsiiyey dibad iyo gudaba dadweynaha degaanka Somalida Ethiopia, ayaa dad ay waxyeelo ugu gaysteen dalalka Denmar, Sweden, Norway iyo Ingriisku ay ashkatooyin ku oogeen.
Todobaadkan dhaxdiisa ayey maxkamad ku taal dalka Denmark, ku xukuntay xadhig daba gale Ducaale oo isagu ah nin ka soo jeeda Jamhuuriyada Somaliya, balse u tafa xaytay xumaanta dadweynaha degaanka Somalida Ethiopia. Maxkamada ayaa ku xukuntay hal sano oo xadhig ah, maadaama uu ay waxyeeladu ahayd mid afka waxay maxkamadu siisay Ducaale fursad ah in uu iibsan karo xadhiga.
Ducaale ayaa Aflagaado gaadhsiiyey muwaadin Danish ah, oo degaan ahaan ak soo jeeda degaanka Somalida Ethiopia, xiligii uu booqashada ku joogay Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar Denmark.
Dhinaca kale waxaa dalka Sweden ka dhacday todobaadkii hore maxkamad u dhaxaysa 5 ubo-da Jwxo-shiil, ah iyo muwaadin degaanka Somalida Ethiopia ah, oo ay hore dhaawac xun ugu gaysatay UBO. Muwaadinkan oo haysta dhalashada Dutch, ayaa xilaga dhaawaca la gaadhsiiyey ku sugnaa dalka Sweden.
Maxkamadan ayaa markii saddexaad fadhiisatay, mar walba oo ay maxkamadu fadhiisato waxaa soo gala dacwda ruux hor leh oo ubo-da jwxo-shiil ah. Dacwada maxkamada ayaa kolkii ugu horaysay ku bilaabatay labo ruux, haatana ay tiradu marayso 5 ruux. Maxkamada xigta ayaa la filayaa in ay dhacdo xiliga kulaylaha.
Dhinac kale waxaa iyana ka socota dalka Ingriiska, lagula tiigsano dad sanadkii dhamaaday dhaawac ku gaadhsiiyey labo muwaadin oo walaalo ah safaarada Ethiopia horteeda.
Dad dhaawac gaystay qaarkood ayaa hore uga yimid dalal kale si shaci daro ahna isaga dhiibay Ingriiska, kuwaas oo laga yaabo in dib loogu celiyo dalkii ay kolkii hore ka yimaadeen.
Kooxda Jwxo-shiil, oo dhibaatooyin badan u gaysatay dadweynaha degaanka Somalida Ethiopia, ayaa hada ku jirta sida Jarmalkii Jabay kala dhuumasho, waxaana hubaal ah in kuwa badan dambi ku galay magaca Jwxo-shiil, ay qoomamayn doonaan kolka sharcigu abaal mariyo.
Xubin UBO-da Jwxo-shiil ah, oo Lagu Xidhay Xeebta